❤️ Ndeipi nguva yakanakisa yekutumira pa Instagram ? - Facebook
Ndeipi nguva yakanakisa yekutumira pa Instagram ?
Kana iwe uri kuyedza kuwedzera ako ekubatanidzwa mazinga uye kuwedzera yako vatengi base, zvawatumira zvinofanirwa kukwezva huwandu hwekucherechedza nguva dzese. Pane zvinhu zvakati wandei zvaunogona kuita kuti uwedzere kubatana kwako., uye dzakakurukurwa zvakadzama muchikamu chedu cheblogi:
Target ivo hashtag dzakakurumbira
Nyora bio Instagram zvinoshamisa
Gadzira aesthetic kumira
Kana iwe ukaita zvese izvi zvinhu uye uchigadzira hombe zvemukati, pane chinhu chekupedzisira chaungaite kuti nzvimbo yako ibudirire:
Gadzira posvo kana munhu wese ave online.
Izvi hazvingobvumidze vanhu vazhinji kuona yako post., asiwo kuwedzera kugona kwayo kwekushandisa uye kugovana. Isu tinofanirwa kufunga nezve zvimwe zvinhu panguva ino yekushanda. Saka ngatitange nekutsvaga yakanakisa nguva yekutsikisa yako posvo pa Instagram..
Pane here yakanaka nguva yekunyora posvo pa Instagram ?
Muchidimbu, zvinoita kunge kune chaiwo mazuva uye nguva apo iyo Instagram nharaunda seyakazara iri kunyanya kushanda. Tarisa uone iri girafu rinoratidza mazinga e Instagram ese ekubatana muCST : (CST iri kumashure kweGMT kwemaawa mashanu)
Iyi tafura inoratidza kuti mazuva akanakisa ekutumira pa Instagram ndeaya:
Uye isu tinogona kuona kuti nguva dzakanakisa dzekutumira pa Instagram ndidzo:
Chitatu 11 a.m.
Chitatu na1 masikati.
Chishanu na9 am.
Chishanu 10 a.m.
Tinogona zvakare kuona kuti mazuva akaipisisa ekutumira ari:
Uye nguva dzakaipisisa dzekutumira ndidzo:
Zuva nezuva kubva 10 p.m. kusvika 4 a.m.
Izvi zvoga zvinotipa yakanaka yekutangira yeiyo posvo panguva yakakodzera kuti uwane kubatanidzwa kwanyanya kuitika..
Zvakadiniko Nezve Nguva Nzvimbo ?
Nguva dzenzvimbo ndiyo inosarudzika pakusarudza iyo yakanakisa nguva yekutumira pasocial media. Kana vazhinji vevateereri vako vari kunze kwenyika, iwe unofanirwa kufunga kuchinjisa yako yekutumira nzira kuti usangane neaya mariridzi ekuhaya mashedhi.
Izvi zvinoreva kuti kana iwe uri kuUK uye kune vanhu vazhinji muUS neCanada vanofarira zvemukati mako, iwe unofanirwa kushandisa chati iri pamusoro uye kuwedzera maawa mashanu kune yakakwana nguva.
Semuyenzaniso, kana iwe uri kuUK uye kune vanhu vazhinji muUS neCanada vanofarira zvemukati mako, iwe unofanirwa kushandisa girafu iri pamusoro uye kuwedzera maawa mashanu kune yakakwana nguva :
Kana iwe uchida kushandisa Chitatu 11am prime nguva muChicago, unofanira kutumira kuno kuUK na4pm.
Kana iwe uchida kubata ese maviri enzvimbo nguva panguva imwe chete, funga kupatsanura musiyano uye kubata ichangoburwa yeUK yekubatirana spikes nekutumira na2pm, kuitira kuti uchiri kuwana kuzvipira kwakanaka muUnited States kubva na9 am..
Kune zvishandiso zvinokubatsira iwe kuita mashifts panguva yakatarwa nguva zvinoteedzana nekuronga mashifiti.
Paimba ya IBF, isu takabatanidza mupuratifomu yedu yakanakisa programmer iyo inokutendera iwe kumisikidza hurongwa hwezviteshi pasina kunetseka nezvazvo.
Tsvaga kana vateereri vako vachinyanya kushandisa uchishandisa Instagram nzwisiso
Kana iwe uine Instagram bhizinesi account, Instagram inoita kuti zvive nyore kuona yako wega yekuita metric ne Instagram Insights. Instagram Insights inokupa yakasarudzika dhata yeakaundi yako, zviri nyore kunzwisisa uye nyore kuwana:
Kuwana kune peji rako reakaundi nekudzvanya iyo icon pazasi kurudyi kwepikicha yako mufananidzo
Dhinda pane menyu “hamburger” kumusoro kurudyi
Bata iyo Insights sarudzo ine bha chati padyo nayo
Iwe unogona chinja kubva pane zvemukati manhamba kuenda kune chiitiko chiitiko uye vateereri metric.
Kutenda kune aya maficha, iwe unogona kuwana ruzivo rwakadzama nezvekuti vateereri vako vanobatanidzwa sei, pamwe nekuti riinhi uye zviripi.
Tinogona kuzviona izvi kuakaundi iyi, Muvhuro neChitatu aive mazuva akanakisa ekukura kweprofile, zvinoenderana netafura yedu yekuzvipira. Isu tinogona zvakare kuona nzvimbo dzakanakisa, rinova ruzivo rwakakura kuziva kana uchifunga nezvenguva dzenzvimbo uye nenguva yekuburitswa.
Nemashoko aya, iwe unofanirwa kugona kuona yako chaiyo yekudonhedzera poindi yekuratidzira kuitira kuti uwane iyo yepamusoro chikamu chekubata.
Isu tinogona zvakare kuona zvinhu sekuparara kwevakadzi, pamwe nenguva iyo vateveri venhoroondo iyi vanonyanya kushanda.
Kutanga Kugadziridza Yako Instagram Zvinyorwa
Kana iwe uchinyatsoda kukura account yako uye uwane akanakisa nhanho nhanho dzekuita, unofanirwa kushandisa masisitimu aya kuti zvikunakire. Kune zvakare mamwe echitatu-bato kunyorera ayo anotendera Instagram vashandisi kuti vaone rumwe ruzivo nezveakaundi yavo nenzira inobatsira mukukura kweakaundi yavo..
Zvemagariro Monitor inopa yakapusa, yakadzika-ruzivo kuti iwe ugone kunzwisisa vateereri vako uye nekuteedzera yako account kufambira mberi. Ivo parizvino vari kuita yemahara muedzo, saka saina uye tanga izvozvi. Unogona kuisanganisa neyedu akangwara kushandisa michina Software uye ronga zvinyorwa panguva yakanakisa kuti uwane yakawanda yekugona kubatika kuaccount yako.
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramInstagram hainditenderi kupinda : Facebook